Sangano ravana chiremba vakuru re Senior Hospital Doctors Association, rinoti harisi kutambira kurudziro iri kuitwa nesangano re Higher Life Foundation, yekuti vadzokere kumabasa vachipihwa mari nesangano iri.
Mugwaro rakaburitswa neChishanu nesangano iri, Senior Hospital Doctors Association inoti rubatsiro rweHigher Life Foundation rwakanaka chose, asi arwugadzirise matambudziko ari muzvipatara zvehurumende, izvo zvsina mishonga, michina pamwe nezvimwe zvinetswa.
Munyori mukuru we Senior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara, vanoti haisi mari chete iri kudiwa navana chiremba, asi kuti vari kuda kuti muzvipatara munge muine mishonga yakakwana nezvimwe zvikwanisiro kuitira kuti varwere varapwe nemazvo.
Dr. Musara vanoti vanotambira nemufaro chido chiri kuratidzwa nesangano reHigher Life Foundation, asi chavanopokanqa nacho chete inyaya yekuti sangano iri rava kuti haridi kutaura navana chiremba, asi iro rakambotanga raenda kwavari richida kunzwa zvichemo zvavo.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi re Higher Life Foundation, iyo yakavambwa namuzvinabhizinesi, VaStrive Masiyiwa, nemudzimai wavo, Amai Tsitsi Masiyiwa, kuti sangano iri richaita seyi sezvo vana chiremba vari kuramba kutambira kurudziro yaro.
Asi Dr. Musara vanoti muzvipatara mukava nezvose zvinodiwa, uye vana chiremba vachipihwa mihoro inokodzera, vana chiremba vose vasiri kuenda kubasa vanodzokera kumabasa avo.
Vanotiwo havasi kufara nevamiriri vari kupinda mumisangano yavo vakamirira hurumende avo vati vanozochinja maitiro avo kana vabuda mumisangano yavange vachida kugadzirisa zviri kunetsa.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi rasachigaro weHealth Service Board, Dr. Paulinas Sikosana, sezvo vanga vasiri kubatikana panharembozha yavo.
Asi Dr. Musara vanoti dambudziko remuzvipatara rinogadzirisika nyore ndokana hurumende ikazvipira kugadzirisa nyaya iyi.
Vanachiremba vari pasi pesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakatanga kuramwa mabasa muna Gunyana vachiti vanoda kuti hurumende iwedzere mihoro yavo pamwe nekuti muzvipatara muve nezvikwanisiro zvinoita kuti madhokotera ashande nemazvo.
Zvichitevera kusagadziriswa kwedambudziko iri, madhokotera makuru ari musangano reSenior Hospital Doctors Association akatangawo kuramwa mabasa achichema nerimwe chetero ravana chiremba vadiki izvo zvakapa kuti muzvipatara zvehurumende zvisare zvisina vana chiremba vanorapa varwere.
Hurukuro naDr. Aaron Musara